Indlu yoLwandle lwaseCosta Rica
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHansel
Sondela emanzini eCasa Oceano. Ngepatio ebanzi, ichibi elingenasiphelo kunye nendawo ephambi kolwandle kufutshane neTango Mar, i-villa enamagumbi amathandathu ibeka ilanga, isanti kunye nokusefa kanye kumnyango wakho. Enkosi kuhombiso lwayo lwangoku oluqaqambileyo, iimbono ezingaphakathi zikhuphisana nemibono yemithi yesundu kunye namanzi ahlwahlwazayo ngaphandle, kwaye ngenxa ye-concierge, unokucwangcisa imisebenzi, uhambo kunye nenkonzo yompheki.
(Iiholide azibandakanywanga kumaxabiso akhethekileyo)
ECasa Oceano, ekuphela kwento phakathi kwakho nolwandle yithafa, ichibi labucala elingenasiphelo kunye neseti yamanyathelo. Imigca ye-chaise longues kwi-terrace kunye nolwandle ilinde nje ukuba ufunde, ukutshisa ilanga okanye ukulala, kwaye indawo yokutyela ikuvumela ukuba wonwabele impepho yolwandle kunye nesidlo sangokuhlwa okanye ii-cocktails. Iifeni zomoya kunye nesilingi zigcina i-villa ipholile, ngelixa ishawari yangaphandle igcina isanti kwindawo. Ukonwabisa, kukho ithiyetha yasekhaya enesandi esijikelezileyo, ukufikelela kwi-Wi-Fi kunye nee-walkie-talkies.
Amagumbi okulala amathandathu e-villa ane-air conditioning, fan fan, ifowuni kunye nomabonwakude wesathelayithi. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu, igumbi lokuhlambela eline-en-suite kunye ne-Jacuzzi kunye ne-balcony yayo, kwaye kukho amagumbi amabini okulala kunye nebhedi yenkosi kunye neebhedi ezimbini zokumkanikazi, ngokulandelelanayo, amagumbi okuhlambela e-en-suite anebhafu eshushu kunye neebhalkhoni zokujonga ulwandle. Amagumbi amabini okulala kumgangatho omkhulu nawo anebhedi yenkosi kunye neebhedi ezimbini zeendlovukazi kunye namagumbi okuhlambela okwabelwana ngawo; Igumbi lokulala lokumkani linokufikelela echibini. Igumbi lokulala lesithandathu linebhedi enkulu kunye nebalcony.
Umbuki zindwendwe ngu- Hansel
Iifestile ezinde, iindonga ze-pastel, imigangatho efakwe iithayile kunye noyilo oluvulekileyo lweplani yenza ingaphakathi leCasa Oceano libe nomoya kwaye liqaqambe. Igumbi lokuhlala linecandelo elakhelwe ngaphakathi elakhelwe ngaphakathi elijonge ukujongana nolwandle kunye nomabonwakude kwaye linendawo yeendwendwe ezininzi, kunye netafile ekufutshane netafile yokutyela ngamaplanga izihlalo ukuya kwishumi elinambini. Ikhitshi le-gourmet linemibono yolwandle, iikhabhathi zomthi ezintle, kunye nodonga lweefestile ezigoqekayo zivuleleke ukwenza ibha eneendawo zokuhlala ngaphandle.
Iifestile ezinde, iindonga ze-pastel, imigangatho efakwe iithayile kunye noyilo oluvulekileyo lweplani yenza ingaphakathi leCasa Oceano libe nomoya kwaye liqaqambe. Igumbi lokuhlal…